आम नागरिकले सावधानी नअपनाउँदा पर्सामा यो अवस्था आएको हो : एसपी पन्त « रिपोर्टर्स नेपाल
आम नागरिकले सावधानी नअपनाउँदा पर्सामा यो अवस्था आएको हो : एसपी पन्त
पर्सा प्रहरी प्रमुख एसपी गंगा पन्तले पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणको दायरा बढेसँगै पोजेटिभ केशहरुपनि देखिन थालेको बताएकी छिन् । शनिबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै एसपी पन्तले भनिन्,‘विरामीको व्यवस्थापनको लागि अहिले एउटा भेन्टिलेरको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा नभएकाहरूलाई सेमी आइसोलेसन छ । अहिले संख्या बढिराख्दाखेरि जसको घरमा हुन्छ, त्यहाँ होम आइसोलेसन गराएका छौँ ।’ प्रस्तुत छ पत्रकार धमलाले एसपी पन्तसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
के छ हालखबर वीरगञ्जको ? कोरोना संक्रमणको संख्या ह्वात्तै बढ्यो नि, वास्तविकता के हो ?
परीक्षणको दायरा पनि बढेको छ । त्यही अनुसार पोजिटिभ केशहरू पनि बढेको छ ।
परीक्षण पनि तीव्र गतिमा भईरहेको छ ? समस्या छ कि छैन ? विरामीहरूको व्यवस्थापन कहाँ गरिरहनु भएको छ ?
विरामी व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो काम त होइन ।
होइन तपाईहरू त शान्ति सुरक्षा पनि दिईरहनु भएको छ । तपाईहरू समन्वय गर्नुहुन्छ नि त ? सँगै बस्नुहुन्छ, कुराकानी गर्नुहुन्छ ? कोरोनाको संक्रमणबाट बचाउनुछ मुलुकलाई ? पर्सा भयावह स्थितिमा जाँदैछ भनेर धेरैले भनेका छन् । वास्तविकता के छ ?
विरामीको व्यवस्थापनको लागि अहिले एउटा भेन्टिलेरको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा नभएकाहरूलाई सेमी आइसोलेसन छ । अहिले संख्या बढिराख्दाखेरि जसको घरमा हुन्छ, त्यहाँ होम आइसोलेसन गराएका छौँ ।
त्यसो भए अहिले विरामीहरू राख्नको लागि सबै भेन्टिलेटरहरू छन् ?
पर्याप्त मात्रामा त छैन । तैपनि म्यानेजिएबल नै छ अहिलेको अवस्था ।
डाक्टरहरूले काम गर्नुभएको छ ? समस्या छ कि छैन ?
हाम्रो विशेषगरी कोरोना व्यवस्थापनको लागि सरकारी हस्पिटल छ, नारायणी हस्पिटल, त्यहाँ सम्पूर्ण टिमले राम्रो काम गरिरहेका छन् । तर अहिले संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा व्यक्तिहरूलाई कोरोना पोजिटिभ हुनसक्छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था हो । केही प्राइभेट हस्पिटलहरूमा विरामीलाई लग्न सहज छैन किनकि उक्त हस्पिटलहरूमा पि.सि.आर टेस्ट भइसकेको व्यक्तिहरूको रिपोर्ट आउन ढिला हुने, पि.सि.आर गरेको ७÷८ घण्टापछि मात्र रिपोर्ट आउने हुन्छ । त्यसैले प्राइभेट हस्पिटलहरूमा पि.सि.आर रिपोर्ट आइसकेपछि मात्र उपचार गर्छौँ भन्ने भएकोले असजिलो छ । त्यो बाहेक डाक्टरले काम नै नगरेको भन्ने अवस्था होइन ।
काठमाडौँबाट पनि डाक्टरहरू वीरगञ्ज जान तयार छैनन् ?
त्यो त मलाई थाहा भएन । अहिले यहाँ जति डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले काम गरिरहनुभएको छ । अहिलेसम्म सरकारी हस्पिटलबाहेक अरूबाट काम भएको मैले अलि कम नै देखेको छु ।
त्यसो भए उपचार नपाएर विरामीहरू छटपटाएका छैनन् त्यहाँ ? समस्यामा छैनन् ?
कहिलेकाँही पि.सि.आर. रिपोर्टलाई कुर्दाखेरि त्यति धेरै समस्या छैनजस्तो लाग्छ मलाई । यस विषयमा तपाईले हाम्रो आधिकारीक व्यक्ति नारायणी हस्पिटलको निर्देशन लिनुभयो भने बढी जानकारी पाउनुहोला । मैले बुझेको जे छ मैले भनिदिईसकेको छु ।
लापरबाहीको कारणले गर्दाखेरि पर्सामा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दैछ भनेर धेरैले भनेका छन् । सीमाक्षेत्र रक्सौलबाट आवतजावत भईरहेको छ ?
रक्सौल नाका पूर्ण रूपमा बन्द छ । जहाँ खुल्ला बोर्डर छ, त्यो ठाउँमा कतिपय बेलामा यो इन्डियामा टेकिएका छ कि नेपालमा टेकिएको छ भनेर थाहा हुँदैन । इन्डियाको क्षेत्रमा मानिसको दैनिकीसँग जोडिएका सरसामानहरू सस्तो पाइने भएको हुँदा वारीको मान्छे पारी जाने प्रचलन छ, नभएको होइन । कतिको जिविकोपार्जन पनि लामो समयदेखि पारीको सामान लिएर आएर भएको पनि देखिन्छ । त्यसकारणले मान्छे जाने/आउने नै छैन भन्नसक्ने अवस्था छैन । तैपनि हामीले सक्दो प्रयास गरेको अवस्था हो ।
लकडाउन खुकुलो भएपछि पारीबाट लुकिछिपी भित्रिएका कामदारबाट कोरोना संक्रमण फैलिएको छ भन्ने कुरा आएको छ । वास्तविकता के हो ?
पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि पक्कैपनि संक्रमणको अवस्था छ । विशेषगरी त्यसमा आउजाउ गर्ने व्यक्तिबाट नै भएको हो । त्यसमा कुनै शंका छैन । अर्को कुरा हामीले एकदम कडा गर्न नसक्ने क्षेत्र के हो भने अत्यावश्यक खाद्यान्न पदार्थहरूको दैनिक आपूर्ति हुन्छ, कम्तिमा गाडी नै नचलेको अवस्थामा पनि ४००/५०० को संख्यामा बोर्डरबाट आवतजावत गरेका छन् । यसको मतलब कम्तिमा पनि १००० भन्दा ठुलो संख्यामा व्यक्तिहरू आवतजावत गर्ने, विशेषगरी सवारीसाधनको कुरा गरेको मैले, त्यो संख्या आफैमा पनि निकै धेरै छ । जिल्ला नाका जोडिएको विहारमा संक्रमणको संख्या असाध्यै बढी छ । त्यसको प्रभाव त स्वत: पर्ने नै भयो । लकडाउन कडा भएका दिनहरूमा सीमाक्षेत्र पूर्ण रूपले बन्द थियो । त्यस समयमा पनि सप्लाई चेन मार्फत मैले दिएको संख्या आवतजावत गर्ने संख्या हो । कोरोना महामारीको हिसाबमा यो नेपालको लागि ठुलो चुनौती हो ।
रोकथामका लागि हामी किन कडाईका साथ जान सकेनौँ ? प्रदेश सरकारले पनि त्यतातिर ध्यान नदिएको हो कि ?
केन्द्र, प्रदेश सरकार, सुरक्षाकर्मीहरूले त्यसमा ध्यान दिएको अवस्था छ । लकडाउनको समयमा जिल्लाभित्र नेपाल प्रहरीले ठुलो मेहनत गरेको छ । बोर्डर क्षेत्रमा प्रहरीको संख्या पर्याप्त मात्रामा छैन । पक्कै पनि बोर्डर नाकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको अर्को सुरक्षा निकाय त्यहाँ छ । मान्छेको भेषभूषा र संस्कृति पनि उस्तै देखिने भएकोले हामीले भनेजस्तै ठ्याक्कै नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसो भए भारतबाट कामदारहरू आइरहेको कारणले संक्रमण बढ्यो पर्सामा ?
विशेषगरी पर्सा र बाराको सीमानामा औद्योगिक क्षेत्र छ । संक्रमण फैल्याउन त एउटा उद्योगको ५ जना व्यक्ति आयो भने त्यो पर्याप्त हुन्छ, संक्रमण फैल्याउन । बोर्डर नाकामा भएका नागरिकहरूलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोग ज्यादै कम हुन्छ । कतिपय स्थानीयवासीहरू खुल्ला सीमाको फाइदा लिएर तस्करीमा संलग्न हुने व्यक्तिहरू जहाँ सुरक्षा फौजबाट उहाँहरूको पेशालाई असर गर्छ । हेर्दा उस्तै देखिने घर जोडिएको ठाउँहरूमा त्यो हामीले नियन्त्रण गर्ने अवस्था नै कम छ ।
आम जनताले सावधानी अपनाएका छन् ?
पर्सामा त निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ । अहिले मान्छेको मुभमेन्ट पनि बढी भयो । अहिले ठुलो संख्यामा सवारीसाधनहरू बढेको अवस्था पनि छ । लकडाउन भनेको सरकारको लागि गरिदिएको जस्तो गरेर भन्ने व्यक्तिहरू पनि ठुलो संख्यामा देखियो । सावधानी नअपनाइएकै कारणले जताततै यो स्थिति आएको हो । यसलाई आमनागरिकले सावधानी नगरेको कारणले नै यो अवस्था आएको हो ।
त्यसो भए मास्क लगाउनेहरू पनि छन्, नलगाउनेहरू पनि छन् ?
मास्क त पकेटमा राखे पनि प्रहरीलाई देखाउनका लागि लगाउने गरेका छन् । सुरक्षाकर्मीलाई देखाउनका लागि मास्क लगाउने जमात यो पर्सामा मात्र होइन चारैतिर छ । यो समस्याको विषय हो वास्तवमा । File Photo
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो, आफूलाई व्यवस्थित् राखौं : डा. बास्तोला
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका कन्सल्टेन्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन डा. अनुप बास्तोलाले भारतबाट आएका
भारत वार्तामा बस्नैपर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन : डा. राजन भट्टराई
प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा दिने ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले
आवश्कत्ता महशुस गरेर विराटनगरमा लकडाउन गरिएको हो : सहायक सिडिओ खड्का
मोरङका सहायक सिडिओ ध्रुवबहादुर खड्काले कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि महानगरपालिकाले आवश्कत्ता महशुस गरेर विराटनगरमा लकडाउन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोना संक्रमण बढि देखिएका ठाउँमा लकडाउन गरिने र
काठमाडौंमा संक्रमणको जोखिम बढ्यो, अलिक समय नाकाहरु बन्दै गर्नुपर्छ : डा. पाण्डे
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले काठमाडौंमा पर्सा, बाराका मानिसहरुबाट कोरोनाको संक्रमण